Sensor Flow Flow, Sensor ABS, Sensor Truck - Hehua
HEHUA waa xirfadle shirkad soo saaris ah soosaarka dareemayaasha ABS, dareeraha socodka hawada, dareeraha Crankshaft ， Camshaft sensor, dareeraha Truck, EGR Valve. Si gaar ah u siiso xalal xirfadlayaal ah qalabka elektiroonigga ee macaamiisha caanka ah ee gudaha iyo dibaddaba. Shirkadda qaybta ugu weyn ee iskaashiga waa suuqa OE ee Shiinaha iyo dibedda OEM, suuqa OES.
Kuu siin doonaa adeegga adeeg-bixinta iyo iibka ee hal-joogsi ah. Moodooyinka dareeraha ayaa ka badan 3000 shey.
Waxyaabaha iyo ikhtiyaarrada qaybta, wax soo saarka otomaatiga ah, xakamaynta nidaamka, iyo xakamaynta tayada ayaa gebi ahaanba la mid ah tayada OE.
15 sano oo ah dareeraha R&D team iyo kooxda farsamada, sheybaarka madaxa banaan.
Waxaan haynaa adeeg wanaagsan kadib-iibinta si aan u hubino in badeecada loo geeyo macaamiisheena waqtiga, waxaanan leenahay dammaanad tayo-2-sano ah.
Jeep Crankshaft Sensor, Ckp Crankshaft Jago Sensor, Sensor qulqulka hawada badan, Dodge Sensor Flow Flow, Mercedes-Benz Camshaft Sensor, Bmw Crankshaft Sensor,